IPhone ngaphandle kwensizakalo? Zama lezi zixazululo | Izindaba ze-IPhone
UPablo Aparicio | | Ama-terminals we-IPhone, Okokufundisa namanyuwali
Ama-smartphones ethu ayakwazi ukwenza okuningi kangangokuba kwesinye isikhathi siyakhohlwa ukuthi nawo angizingcingo. Ngokwami, angijwayele ukufona kakhulu ocingweni, ngakho-ke ekuqaleni bengingeke ngikhathazeke kakhulu ngokulahlekelwa yimithombo ukube bekungekhona ukuthi ngeke ngikwazi ukuxhumana ne-inthanethi, ngakho-ke Ngeke ngikwazi ukuxhumana nanoma ngubani futhi akekho noyedwa ozokwazi ukuxhumana nami. I- iPhone ingaba nezinye izinkinga zokuhlanganisa esizoxoxa ngakho kulokhu okuthunyelwe.
Ngokwami, angazi ngokwenyama noma ngubani ohlangabezane nezinkinga zokumboza ku-iPhone njengalezo ezishukumisa le ndatshana, kepha kubikwe amacala angajwayelekile lapho i-iPhone ilahlekelwa yisiginali kuye ngokuthi iSIM khadi eyodwa isetshenzisiwe yini noma enye, ifinyelela kwehlukile iziphetho zokuthi kungani lokhu kwehluleka kutholwa Engikukhumbulayo, U-Apple akazange avume ngokusemthethweni ukuthi kunenkinga nge-iPhone eyethulwe, ngakho ngezansi sichaza ukuthi yini ongayenza uma uthola umyalezo othi "Ayikho insiza" kusikrini se-iPhone
1 Okufanele ukwenze uma i-iPhone yakho ilahlekelwa ukumbozwa
1.1 Hlola isimo se-SIM
1.2 Bheka isimo sethileyi le-SIM
1.3 Buyekeza amasethingi noma izilungiselelo ze-iOS
1.4 Shayela opharetha bese usinika incazelo
1.5 Kuthiwani uma siguqula opharetha?
Okufanele ukwenze uma i-iPhone yakho ilahlekelwa ukumbozwa
Hlola isimo se-SIM
Into yokuqala esingayenza ukuhlola isimo se-SIM. Njengoba singezona izingcweti futhi singase senze iphutha, indlela engcono yokubheka ukuthi i-SIM khadi isesimweni esihle noma cha izame kwenye i-iPhone. Uma ikhadi lisebenza ku-iPhone entsha, sesivele sazi ukuthi lilungile futhi kufanele silithole iphutha kwenye indawo.
Uma sifuna ukuqinisekisa ukuthi ikhadi liyasebenza, ngoba i-iPhone yesibili nayo ingaba nenkinga, futhi singayihlola kwamanye amadivayisi, njenge-iPhone 6 noma enye i-smartphone engahlangene ne-Apple.
Bheka isimo sethileyi le-SIM
Ingabe i-SIM tray ilimele? Uma sibheka ukuthi ugqoko lungakhubazeka ngeshumi lamamilimitha, indlela engcono yokubheka ukuthi ithreyi ilungile yini yisebenzise kwenye i-iPhone. Isibonelo, uma sazi umuntu one-iPhone i-SIM khadi yakhe esebenza kahle, okungcono kakhulu esingakwenza ukuzama ithileyi lethu nge-SIM yabantu esibaziyo ku-iPhone yabo. Uma kusebenza, singakhipha ukuthi inkinga ikuthreyi lethu le-SIM.
Buyekeza amasethingi noma izilungiselelo ze-iOS
Lokhu kuhlala kubaluleke kakhulu ukujabulela ukuxhumana okuhle. Amasethingi opharetha ancika ku-opharetha, njengoba negama lisho. Lapho benza noma yiluphi ushintsho olungathinta i-iPhone yethu, opharetha uzokwethula izilungiselelo ezintsha lezo izovela itholakale lapho sixhuma i-iPhone yethu ku-iTunes.
Njengoba sesichazile okungenhla, uma sihlangabezana nezinkinga zokumboza ku-iPhone noma enye i-iPhone, okuzodingeka sikwenze ukuxhuma idivaysi yethu ku-iTunes, hlola ukuthi ngabe kukhona yini ukubuyekeza okutholakalayo futhi, uma kukhona, faka izilungiselelo ezintsha ze-opharetha. Uma ukuvuselelwa okutholakalayo kunguhlobo olusha lwe-iOS, kuhlale kungumqondo omuhle ukugcina uhlelo lwakho lusesikhathini, ngakho-ke kufanelekile ukufaka isibuyekezo.
Shayela opharetha bese usinika incazelo
Yize lokhu kuyinto yokuqala obekufanele ngabe siyayenza, ngikubeke cishe ekugcineni ngoba sesivele sazi ukuthi opharetha bazisebenzisa kanjani, ukuthi bazozama ukusenza sibe nesiyezi futhi bakwazi nokusenza sishintshe amafoni uma esebenza kahle futhi imbangela yezinkinga zethu yi-opharetha yethu.
Kunoma ikuphi, ngicabanga ukuthi kungaba icala elingajwayelekile, opharetha ingasinikeza isisombululo esisebenza ngokuphelele. Kwesinye isikhathi, lesi sixazululo sibandakanya ushintsho olulula lwe-SIM khadi, into engasebenza yize besingakwazi ukuchaza ukuthi kungani, ngenkathi kuyaqabukela bengabona ukuthi yibo abanecala, mhlawumbe kungenxa yenkinga ethile noma ngoba ukumbozwa kwabo akusenzi esitebeleni endaweni esihlala kuyo.
Kuthiwani uma siguqula opharetha?
Ububi obukhulu, amakhambi amakhulu. Kuleli qophelo ngabe sesivele sizame konke futhi besizokuqinisekisa ukuthi i-iPhone yethu isebenza kahle ne-opharetha X. Isixazululo silula: uma intengo ye-opharetha u-X ikufanele, Isixazululo kungaba ukusebenzisa opharetha ngokumbozwa okuhamba kahle endaweni lapho sihamba khona. Kungani uhlupheka uma inani lifana? Eqinisweni, yize ngangingamshintshi opharetha, nguyena opharetha owaguqula ukumbozwa, ngaqala ukuba nezinkinga zejubane eliphansi, u-opharetha wephula isivumelwano sakhe no-opharetha onikeze ukumbozwa futhi, lapho kushintsha, ukuxhumana kwami ​​kwejubane kwandiswa 10, yize kuzo zombili lezi zimo ngabona uphawu lwe-3G kubha yesimo.
Ngabe ukwazile ukuxazulula izinkinga zokumbozwa kwe-iPhone yakho? Ngabe iyaqhubeka nokubeka i-No Service esikrinini?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Ama-terminals we-IPhone » IPhone ngaphandle kwensizakalo? Zama lezi zixazululo
UMercedes cinelli kusho
I-iPhone yami ayingivumeli ukuthi ngingene futhi kubonakala sengathi ayinayo insiza, inginike ithuba lokufaka i-id ne-password yami futhi iveze ukuthi bekungalungile. I-SOS
Phendula uMercedes Cinelli
UJimmy Iovine: "E-Apple Music sizama ukudala ulwazi oluphelele ngamasiko"
Ungakhokha kanjani eziteshini zikagesi nge-iPhone yakho